စာပေ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Ryleev Kondraty Fedorovich, အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်းကိုအောက်တွင်ဆွေးနွေးကြမည်, ရုရှားသမိုင်းနှင့်စာပေအပေါ်အံ့သြဖွယ်အမှတ်အသားထားခဲ့တယ်။ သူသည် A.S. Pushkin နှင့် A.S. Griboyedov တို့နှင့်နီးကပ်စွာရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးသည် ...
V.P. Astafiev, "Vasyutkino ရေကန်": အလုပ်၏စာမျက်နှာများမှတဆင့်
VP Astafiev သည်ရုရှားဆိုဗီယက်စာပေ၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူတို့ကသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ခေတ်၏သြတ္တပ္ပစိတ်နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားအတိုင်းအတာဟုခေါ်ကြသည်။ လူနှင့်သဘောသဘာဝ၊ လူနှင့်စစ်၊ ကျေးရွာဘဝ၊ ဂေဟဗေဒ ...
Hans Christian Andersen ရဲ့ "Snow Queen" အကျဉ်းချုပ်
မျိုးဆက်များစွာအတွက်စာဖတ်သူများသည်ဤပုံပြင်သည်ချစ်မြတ်နိုးရဆုံးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒိန်းမတ်စာရေးဆရာ Hans Christian Andersen ၏ "Snow Queen" ၏အနှစ်ချုပ်ကိုကလေးများနှင့်လူကြီးများမှပြန်လည်ပြောပြနိုင်သည်။
"ဟုအဆိုပါနန်းတော်၌ဝံပုလွေ။ " I.A.Krylov အားဖြင့်ဒဏ္.ာရီ
ထိုကဲ့သို့သောဒဏ္asာရီကဲ့သို့သောစာပေအမျိုးအစားသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကစတင်ခဲ့သည်။ တစ် ဦး ကလိမ္မာသောပုံရိပ်ဇာတ်ကြောင်းဆက်ဆက်အဓိကစိတ်ကူး - ကငျြ့တရားပါဝင်သည်။ ဒီအမျိုးအစားကိုရုရှားစာပေထဲကိုယူဆောင်လာခဲ့ပြီးအိုင်ဗန်အန်ဒရီဗစ်ခ်ျခရော့ဗ်ကပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့သည်။ အကယ်၍ …
"တစ် ဦး ကအထီးကျန်ရွက်တောက်ပနေသည်": သင်အကြိုက်ဆုံးကဗျာ၏အကျဉ်းချုပ်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
M. Yu ။ Lermontov သည်ရုရှားကဗျာနှင့်စာပေ၏အကောင်းဆုံးဂန္ထဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ သူ၏စကားလုံးကျွမ်းကျင်မှု၊ လိုင်းများ၏ကဗျာနှင့်စကားစုတစ်ခုစီတွင်တွေ့ရခဲသော ၀ မ်းနည်းမှုသည်မွေ့လျော်ခြင်းနှင့်ရောနှောနေသည်။
A. အ Pushkin, "ဝန်ခံ": ကဗျာ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Alexander Sergeevich Pushkin သည်အသက် ၂၇ နှစ်တွင်“ ၀ န်ခံခြင်း” ကိုရေးသားခဲ့သည်။ ဒီကဗျာကိုသူ့ဂီတများစွာထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Alexandra Osipova ကိုရည်စူးပြီးရေးသားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ အခြားတီထွင်ဖန်တီးရှင်များစွာလိုပဲ Pushkin ဟာအလွန်အမင်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ...
ကဗျာ၏နက်ရှိုင်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု။ Balmont "Verbalism"
Konstantin Balmont သည်တစ်ချိန်ကမယုံနိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်လိုစိတ်ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်သည်သူ၏ကဗျာကိုအထူးနှစ်သက်ခဲ့သည်။ Balmont ၏လက်ရာများသည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်မှုနှင့်စာသားများဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီး၎င်းတို့သည်နူးညံ့ကြင်နာမှုနှင့်နုပျိုမှုတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
Andrey Usachev သည်ကလေးစာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာနှင့်စကားပြေစာရေးဆရာဖြစ်သည်။ သူသည်ခက်ခဲသည့်အချိန်များတွင်စာပေကောင်းများဖန်တီးပြီးသီချင်းများအားလုံးကိုရေးသားခဲ့စဉ်ကစာပေအသိုင်းအဝိုင်းတွင်သူထင်ရှားခဲ့သည်။ အခြားစာရေးဆရာ ...
ရုရှားစာပေကိုနှစ်သက်သောမျိုးဆက်တစ်ဆက်ထက်မကအမ်ယူ။ လermontov၏ဘဝသည်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ သူမ၏အချိန်လေးအချို့သည်လျှို့ဝှက်နက်နဲစွာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ များစွာသောဖြစ်ရပ်များ, သူတို့ကဖုံးလွှမ်းလျှင်, ထို့နောက် ...
Blaginina အယ်လီနာ: အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှု
Tvardovsky ကကဗျာ "Forest in Autumn" သည်သေးငယ်သောလက်ရာတစ်ခုကိုရေးသားခဲ့သည်
အဆိုပါထူးခြားတဲ့ရုရှားကဗျာဆရာ A.T. Tvardovsky သည်ကောင်းသောအကျင့်များစွာကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ သာမန်လူများထံမှသူသည် Sergei Yesenin ကဲ့သို့သူ၏အလုပ်တွင်ရုရှားသဘာဝ၏လှပမှုအားလုံးကို၎င်း၏ထူးခြားသောရိုးရှင်းမှုအားဖော်ပြရန်စီမံနိုင်ခဲ့သည်။
"ဗိုလ်ကြီး Vrungel ၏ Adventures ကို": အကျဉ်းချုပ်။ အခန်းကြီးများက "ဗိုလ်ကြီး Vrungel ၏ Adventures ကို"
Captain Vrungel ၏စိတ်ကူးယဉ်ခရီးနှင့်ပတ်သက်သောရယ်စရာဇာတ်လမ်းကိုဆိုဗီယက်စာရေးဆရာ Andrei Sergeevich Nekrasov ရေးသားခဲ့သည်။ အဆိုပါပုံပြင်အခန်းကြီးနှစ်ဆယ်နှစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိသည့်သင်္ဘောသားတစ် ဦး ၏အဖြစ်အပျက်များအကြောင်းပြောပြသည်။ ဆရာ ...
Borodino ။ Lermontov M.Yu. ကဗျာ၏သုံးသပ်ချက်
Mikhail Lermontov သည်တိုတောင်းသောဘဝတွင်စာလုံးပေါင်း၏လှပမှုနှင့်အဓိပ္ပာယ်နက်ရှိုင်းမှုကိုအံ့အားသင့်စေသည့်တောက်ပသောလက်ရာမြောက်များစွာကိုရေးသားခဲ့သည်။ ကဗျာဆရာသည်ရူပဗေဒ၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ရုရှားလူမျိုးများ၏ရိုးရှင်းမှုနှင့်ရိုးသားမှုတို့ကိုအမြဲလေးစားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ...
Voznesenskaya ဂျူလီယာ Nikolaevna: အတ္ထုပ္ပတ္တိ, အကျင့်ကိုကျင့်
ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာနှင့်သာသနာပြုဖြစ်သည့်ဤထူးခြားသောအမျိုးသမီး၏ဘဝသည်မလွယ်ကူခဲ့ပါ။ သာမန်အဖြစ်အပျက်များအပြင် Yulia Voznesenskaya ၏ဘဝစာအုပ်တွင်စခန်းများနှင့်အကျဉ်းထောင်များ၊ ဝန်ခံခြင်းစသည့်ခက်ခဲသည့်စာမျက်နှာများလည်းပါရှိသည်။
အေ Pushkin "Gypsies": ကဗျာ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
အလက်ဇန်းဒါး Sergeevich သည်သူ၏အစောပိုင်းအလုပ်၌ Byron နှင့် Russo တို့၏အတွေးများကိုမကြာခဏကူးယူခဲ့သည်။ ဤစာရေးဆရာများသည်ရုရှားကဗျာဆရာကြီးအတွက်ရုပ်တုများဖြစ်သော်လည်းအချစ်လွန်အချိန်ကာလကုန်လွန်သွားပြီးအတွေးအသစ်များပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
"Murzuk" Bianki - ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်
သူသည် Bianki မှ Murzuk ဇာတ်လမ်းကိုရေးသားခဲ့သည်။ အကျဉ်းချုပ်သည်ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်အလုပ်နှင့်စာဖတ်သူကိုသိကျွမ်းလိမ့်မည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာတောအုပ်ထဲမှမြင်ကွင်းတစ်ခုမှစတင်သည်။ The Hunter စာရေးသူဟာစာဖတ်သူကိုစာဖတ်သူကိုအဓိကဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့လူကြီး Andreevich ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။
Yesenin, "Katchalov's Dog": ဒီဖန်တီးမှုကိုဘယ်သူ့ဆီအပ်နှံခဲ့သလဲ။ ကျနော်တို့ရာစု၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထုတ်ဖေါ်
ရုရှားကဗျာဆရာမနှင့်အမျိုးသမီးများအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သူ Sergei Yesenin ကို ၁၈၉၅ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုသူဘာကြောင့်အလွန်ဆွဲဆောင်ခဲ့တာလဲ။ ပထမ ဦး စွာသင်တန်း၏, တွန်းလှန်အသွင်အပြင်။ ...
ဂျိမ်း Aldridge, နောက်ဆုံးလက်မ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်
အပေါ် Posted 15.09.2019 16.12.2019
ဂျေ Aldridge သည်သူ၏ဝိသေသစတိုင်လ်အတွက်နောက်ဆုံးလက်မရေးသားခဲ့သည်။ စာရေးသူအနေဖြင့်အလုပ်ကိုဖန်တီးသူ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာလူတစ် ဦး မည်သို့ဖွဲ့စည်းသည်ကိုဖော်ပြရန်၊ ကလေးများသည်မိန်းကလေးများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသောအချိန်ကိုဖမ်းယူရန်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 104 Next ကို 's Page
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,080 စက္ကန့်ကျော် Generate ။